यी चर्चित भारतिय अभिनेत्री यसरी ब'र्बा'द भइन् ! - Filmy News Portal Of Nepal
यी चर्चित भारतिय अभिनेत्री यसरी ब’र्बा’द भइन् !
बलिउड नायक वरुण धवनको फिल्म ‘एबीसीडी टु’की नायिका र डान्सर लरेन गटबिलले आफूबारे निकै ठू’लो खु’लासा गरेकी छिन् । उनले एक अन्तर्वार्तामा फिल्म ‘एबीसीडी टु’ पछि आफू न’राम्रोसँग र’क्सी र ला गुऔष धको न’शामा परेको बताएकी छिन् । ३१ वर्षीया नायिका लरेन गटबिलले मुम्बई मिररलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफू कतै अँध्यारोमा ह’राएको बताएकी थिइन् ।
लगभग ८ महिनासम्म आफूले सोसल मिडियामा हाँसिरहेको फोटो राखेता पनि भित्र भित्रै आफू अ’त्यधिक त’नावमा भएको बताइन् । नायिकाले भनिन्, ‘म अ’साध्यै दुःखी थिएँ । म आफ्नो उ’दासीको उपचार न शामा खोज्न थालेँ । म र’क्सी पिउँथे, ला’गुऔ’षधको प्रयोग गर्दथेँ । सायद ती सबै कुराहरु गर्थेँ जसले मलाई खुसी बनाउन सक्थ्यो ।’
यस्तो गरिराख्दा लरेनले आफूलाई पी’डित पनि ठान्ने गरेको बताइन् । आफू यो द’लद’लबाट निस्कन उनलाई धेरै नै समय लागेको पनि उनले बताइन् । लरेन बिग बस ११, झलक दिखलाजा सिजन ६ मा पनि देखिइसकेकी छिन् । यसबाहेक उनले विभिन्न पञ्जाबी फिल्म र गीतमा पनि काम गरेकी छिन् । – एजेन्सी ।